"Musoro Pointer" mune beta nyowani yeCatalina: iyo inotora inotevera maziso ako | Ndinobva mac
"Musoro Pointer" yakawanikwa muCatalina beta nyowani: iyo inotora inotevera maziso ako
Iyo beta vhezheni yeApple's anoshanda masystem anoenda mushe kwazvo kuti awane mabasa matsva ayo anosanganisirwa nekambani ayo anogona kuyedzwa pamberi pehurukuro yavo yepamutemo. Nezuro beta nyowani yeCatalina yakavhurwa, uye maawa mashoma gare gare mushandisi akatotumira chinhu chitsva pa Twitter.
Ndezve kufambisa iyo inotora nemaziso ako, pasina kubata mbeva kana trackpad. Zvisinei nekufambira mberi kukuru uko izvi zvinomiririra vanhu vane matambudziko epanyama kushandisa keyboard kana mbeva, rinogona kuve basa rekuda kuziva iro rinogona kubatsira mune mamwe mamiriro ezvinhu anokutadzisa kubata Mac, senge murabhoritari, semuenzaniso. .
Nezuro Apple yakatishamisa nekutanga mabheas matsva eayo mashandiro, kusanganisira iyo yekutanga beta ye macOS Catalina 10.15.4. Nguva pfupi yapfuura yaiwanikwa kune vanogadzira kambani, muyedzo we beta wakawana chinhu chitsva chinodaidzwa chinonzi "Head Pointer."
Guilherme rambo shambadza pane yako Twitter account mashandiro echinhu ichi chitsva yakaitwa mukuwanika kweMacs. Uine «Musoro Pointer» unogona kudzora iyo cursor nekufamba kwemeso ako, pasina kudikanwa kwegonzo kana trackpad.
Nyowani "musoro pointer" chinowanikwa chinowanikwa mu10.15.4. Dzora iyo cursor nekufamba kwemusoro. pic.twitter.com/VJuZ2JR503
- Guilherme Rambo (@_inside) February 5, 2020
Basa racho rine mamwe marongero anogona kugadziridzwa, senge nzira inofamba nescursor, uye kumhanya kwechinongedzo. Iwe unogona zvakare kusarudza kubva kune ipi kamera iri basa rinoshanda, kungave kubva kune yakasarudzika kana yekunze imwe. Iyi ficha inogona kumisikidzwa nguva dzose, kana kuitwa nekuda kubva pabhobhoyo.
Apple yakagara ichinyatso chenjera nezve nzira iyo zvishandiso zvinofambidzana nevashandisi. Iwe unogara uchitsvaga nzira nyowani dzekuita kuti zvive nyore kushandisa makomputa ako senge iPhones, iPads, uye Apple Watch. Ichi chiratidzo chitsva chacho. Pane mamiriro ezvinhu umo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana iwe usingakwanise kubata mbeva kana trackpad uye iri basa rine chokwadi chekuuya rinobatsira. Kuuya nekukurumidza kune wese munhu mune yekupedzisira vhezheni ye macOS Catalina 10.15.4.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » MacOS Catalina » "Musoro Pointer" yakawanikwa muCatalina beta nyowani: iyo inotora inotevera maziso ako
Steve Wozniak muhoro paApple iri $ 50 pasvondo
Safari Technology Preview vhezheni zana yave kuwanikwa